Izindaba - Mayelana nokwakhiwa kobuchwepheshe bokuhlunga amandla
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokuhlunga amandla esixhumi, ubuchwepheshe bokuhlunga busebenza kakhulu ekucindezeleni ukuphazamiseka kwe-electromagnetic, ikakhulukazi kusiginali ye-EMI yokushintsha ukunikezwa kwamandla, okungadlala indima enhle ekuphazanyisweni kokuqhutshwa kanye nemisebe yokuphazamiseka. Amasiginali wokuphazamiseka kwemodi ehlukile namasiginali wokuphazamiseka wemodi ejwayelekile angamela zonke izimpawu zokuphazamiseka kokuhambisa ekunikezelweni kwamandla.
Eyokuqala ikakhulukazi ibhekisa kusiginali yokuphazamiseka edluliswa phakathi kwezintambo ezimbili, okungeyokuphazanyiswa kokulinganisa futhi ibonakala ngemvamisa ephansi, ukuphakama kokuphazamiseka okuncane nokuphazamiseka okuncane okukhiqizwe ngogesi. Lokhu okwedlule ikakhulukazi kubhekiswe ekudlulisweni kwezimpawu zokuphazamiseka phakathi kocingo nendawo ebiyelwe (umhlaba), okungeyokuphazanyiswa okungalingani, futhi kubonakala ngemvamisa ephezulu, ukuphakama okukhulu kokuphazamiseka nokuphazanyiswa okukhulu kwe-electromagnetic.
Ngokuya ngokuhlaziywa okungenhla, isiginali ye-EMI ingalawulwa ngaphansi kwezinga lomkhawulo elichazwe ngamazinga we-EMI ukufeza inhloso yokwehlisa ukuphazamiseka kokuqhuba. Ngaphezu kokucindezelwa okusebenzayo kwemithombo yokuphazamiseka, izihlungi ze-EMI ezifakwe kumasekethe wokufaka nawokukhipha wokunikezwa kwamandla nakho kuyindlela ebalulekile yokuvimbela ukuphazanyiswa kwamandla kagesi. Imvamisa yokusebenza ejwayelekile yamadivayisi kagesi imvamisa iphakathi kuka-10MHz no-50MHz. Iningi le-EMC ejwayelekile yomkhawulo wezinga lokuphazanyiswa okuphansi kakhulu kwe-10 MHZ, yesiginali ye-EMI yokuphakelwa kwamandla okuvama okuphezulu, inqobo nje uma ukukhetha ukwakheka kwenethiwekhi kuyisihlungi se-EMI esilula noma ukuhlukanisa isifunda sesihlungi se-EMI kulula, hhayi kuphela okungafinyelela inhloso yokwehlisa ukuqina kwemvamisa ephezulu yemodi ejwayelekile, futhi kunganelisa umphumela wokuhlunga wemithethonqubo ye-EMC.
Umgomo wokuklama wokuxhuma kagesi ususelwa kumgomo ongenhla. Kunenkinga yokuphazamiseka kokusebenzisana phakathi kwezinto zikagesi namandla kagesi naphakathi kwemishini eyahlukahlukene kagesi, futhi isixhumi sikagesi sokuhlunga kuyindlela enhle yokunciphisa ukuphazamiseka. Njengoba iphini ngalinye lesixhumi sesihlungi sinesihlungi esiphansi, iphini ngayinye ingahlunga ngempumelelo imodi ejwayelekile yamanje. Ngaphezu kwalokho, isixhumi sesihlungi sikagesi sinokuhambisana okuhle, usayizi wesixhumi esibonakalayo nosayizi wokuma nesixhumi esivamile sikagesi ngokufanayo, ngakho-ke, zingashintshwa ngqo.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwesixhumi samandla esihlungi nakho kunomnotho omuhle, ikakhulukazi ngoba isixhumi samandla esihlungi sidinga ukufakwa kuphela ethekwini lekesi elivikelwe. Ngemuva kokuthi isuse ukuphazamiseka kwamanje kukhebula, umqhubi ngeke esasizwa isignali yokuphazamiseka, ngakho-ke inokusebenza okuzinzile kunentambo evikelwe. Isixhumi sikagesi sokuhlunga asinazo izidingo eziphakeme zokuxhuma ikhebula ekugcineni, ngakho-ke akudingeki ukuthi isebenzise nhlobo ikhebula elivikelwe eliphezulu, okuqhubeka nokukhombisa umnotho walo ongcono.
Isikhathi Iposi: Oct-19-2019